KosmoTime: Abuur Hawlo Waqti U Haysanaya Jadwalkaaga | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 18, 2020 Arbacada, Nofeembar 18, 2020 Douglas Karr
Sida lammaane aan ka yahay hay'ad la shaqeysa shirkadaha ganacsiga, maalmahaygu waa ciil, kalandarkayguna waa qasan yahay - ka soo kabashada iibka, istiraatiijiyadda, istaagga, wada-hawlgalayaasha, iyo shirarka lammaanaha aan joogsiga lahayn. Inta udhaxeysa wicitaanadaas oo dhan, waxaan ubaahanahay inaan runtii helo howsha aan uqabtay macaamiisha, sidoo kale!
Hal shay oo aan shaqsiyan horey u qabtay ayaa ah mid fudud xannibay waqtiga jadwalkayga kalandarkayga si aan u hubiyo inaan u dhammaystiri karo hawlahayga oo aan ula socodsiin karo macaamiisheenna. Markii xayndaabkaygu soo baxo, waxaan eegay warqaddayda kalsoonida ee waraaqda waxaanan bilaabayaa inaan hoos u dhigo shaqooyinka muhiimka ah.
Maareynta Waqtiga KosmoTime
Waqtiga KosmoTime waa barnaamij maareyn waqti ah oo ka caawinaya xirfadleyda inay shaqo ku qabtaan iyagoo ku dhigaya jadwalka jadwalka iyada oo la adeegsanayo astaamaha ka hortagga khalkhalgelinta otomaatiga ah. KosmoTime waa isku xirka ka maqan ee u dhexeeya qabashada shaqadaada, isku waafajinta shaqadaas jadwalkaaga, iyo hubinta in aysan jirin wax jeediya inta aad ku guda jirto.
Dufcadi Hawlahaaga - hawluhu badanaa waa kuwo yar-yar oo loo maro mashruuc ballaaran. KosmoTime waxay kuu suurta galinaysaa inaad kooxaysid hawlahaaga ka dibna jadwal u sameyso waqtiga si aad u hubiso in mashruuca la dhameystiri karo
Xir Xirmooyinka Dhamaan - KosmoTime waxay xireysaa tabkaaga waxayna damineysaa ogeysiiskaaga Slack marka aad bilaabeysid howshaada. Marka aad dhamayso, KosmoTime waxay ikhtiyaar ahaan u furi doontaa dhammaan tabsyada iyo ogeysiisyada
Ku dar Task ka Chrome - KosmoTime waxay kuu ogolaaneysaa inaad calaamadeysato URL kasta oo aad u rogto Task hal guji oo ka bilow Google Chrome. Mar dambe ayaad u qoondeyn kartaa Sprint oo aad ku qaban kartaa waqtiga saxda ah, diiradda saxda ah.
Kaydso Jadwalkaaga - KosmoTime waxay si toos ah ula midoobeysaa kalandarkaaga Microsoft ama Google. Kudar hawl ama baloog hawleed, ku jiid jadwalkaaga, waxaadna ku dheereyn kartaa waqtiga si aad u joojiso inta ugu badan ee aad u baahan tahay si aad shaqadaada u gaarto.
Hadafka KosmoTime waa inuu u suurta galiyo adeegsadayaasha inay gaaraan wax soo saarkooda buuxa, geeddi socodkuna wuxuu soo ceshanayaa xakamaynta waqtigooda iyo dareenkooda xorriyadda s
Tags: suuq-galka agilegooglekosmotimeMicrosoftmaaraynta hawshamaamulaha shaqada
Global Ecommerce: otomatiga vs mashiinka vs tarjumaada dadka ee deegaanka